Iran dhaqaale ahaan maka faa’iidaysatay heshiiskii Nuyuukleerka? | Radio Banadir
Home Wararka Iran dhaqaale ahaan maka faa’iidaysatay heshiiskii Nuyuukleerka?
Balse madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si joogto ah ugu hanjabaya in uu ka laaban doono heshiiskaas, islamarkaasna go’aan ka gaari doono 12-ka bishan May in uu dib usoo celiyo cunaqabatayntii dhaqaalaha ee saarnayd Iran.
Iyada oo taariikhdaas ay aad usoo dhawaanayso ayaa barnaamijka Xaqiiqo Raadin ee BBC-da waxa uu u kuurgalauaa waxyaabaha ay Iran ka faa’iiday heshiiskan.
Previous articleTaliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo tababar usoo xiray dufcadii afaraad ee Ururka 60-aad ee Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Qaranka
Next articleBurcadda adduunka oo bilaabay isticmaalka diyaaradaha Drones-ka